Tuesday May 08, 2018 - 11:36:02 in Wararka by Super Admin
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ciidamada Kenya kasoo gaaray weerar hor leh oo lagula beegsaday gudaha dhulka Soomaalida NFD ee gumeysiga ku hoos jira.
sawir weerar gaari looga gubay Booliska Kenya oo mandheera ka dhacay
Wararka ka imaanaya gobolka Mandheera ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay tira kalane ay dhaawacmeen kadib markii qarax lala helay gaari dagaal oo ay la socdeen ciidamada GSU-da loo yaqaan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in askari Kenyaan ah uu ku dhintay qaraxa oo ka dhacay deegaanka Dabaasiti ee hoos yimaad Mandheera.
"hal askari oo katirsan ciidamada gaalada Kenya gaar ahaan kuwa ashashaadda ladirirka GSU ayaa dhimtay kadib markii ay Mujaahidiintu qarax kula beegsadeen gobolka Mandheera" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxu uu qeybta hore ka haleelay gaari ay ciidamada Kenya la socdeen, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladda Kenya oo ku aaddan weerarkan ka dhacay gobolka Waqooyi Bari loo bixiyay.